मिर्गौलारोगले १२ सदस्य गुमाएको परिवार, न आउँछ दसैँ, न तिहार – Health Post Nepal
२०७७ चैत ३१ गते | Tuesday, 13 Apr, 2021
मिर्गौलारोगले १२ सदस्य गुमाएको परिवार, न आउँछ दसैँ, न तिहार
२०७५ कार्तिक ३ गते ९:२५
बिहानको पहिलो पिसाब किन पहेँलो हुन्छ?
मिर्गौलारोगबाट बच्न दिनहुँ गर्नुस् यी काम
आमा नन्दकला उपाध्याय, छेउमा बसेका नारायण
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नं. ३ दर्खासी गाउँकी ८४ बृद्धा नन्दकला उपाध्याय नियमित पुजाआजा गछिन् । पूजाआजा गर्नुको उनको उद्देश्य सन्तानको खुसी हो ।तर दर्भााग्य उनको परिवारमा बर्षेनीजसो पीडामाथि पिडा थपिँदै गएको छ । नन्दकलाको परिवारले परिवारका सदस्यमा मात्र गुमाएका छैनन्, सम्पत्तीको नाममा रहेको ९ कठ्ठा जमिन पनि घट्दै गएको छ । चाडपर्व र खुसीका दिन परिवारका लागि धेरै टाढा हुदै गएका छन् ।
छोराछोरी र नातिनाजति हेरेर खुसी हुने समयमा नन्दकलाका चिन्ताको गहिराईमा डुबेकी छिन् । आँखै अगाडि आफ्ना सन्तान एकपछि अर्कोगर्दै संसारबाट बिदा हुँदैछन् ।
अधिकांश नेपाली समुदायले दशैं मनाउनका लागि पैसा र सामानको जोहो गरिरहँदा नन्दकलाको घरमा दसैँको उत्साह छैन् । उपचारको लागि भौतारिरहेको परिवारले दशैंमा खर्च गर्ने रकम भए केही पटकको उपचारको लागि त टर्थ्यो भन्ने अवस्थामा छ । दसैँ तिहार, तिजको जस्ता चाडपर्वहरुमा छोरीहरुलाई समेत घरमा बोलाई रमाइलो गरी मनाएको दिन अहिले उनका लागि सपना जस्तै लाग्छन् । ‘आफन्त जन जम्मा हुन्थे, मिठो नमिठो बनाएर खाथ्यौ’ बृद्धा नन्दकलाले भनिन्, अहिले के दसैँ मनाउनु, पुराना रमाइला दसैँ फर्किफर्कि सम्झनामा आउँछ । परिवारमा रोग भित्रिएपछि हामीलाई न दसैँ, न तिहार भएको छ ।’ उपचारको खर्च चलाउन धौधौ छ बिगतलाई सम्झना गर्दै नन्दकला भक्कानिदै भनिन्, ‘छोराछोरी जन्माएर के गर्नु म दु:खीयालाई ‘सबै सन्तानलाई म भन्दा छिटै दैबले हरेर लगिसक्न थाले ।’
रिवारका १२ जनालाई मिर्गौला रोगले खोस्यो
नन्दकलाका ३ छोरा र १ छोरी मिर्गौलारोगका कारण मृत्यु भइसकेका छन् । नन्दकलाको श्रीमान पनि मिर्गौला रोगले मृत्यु भएका हुन् । कहालीलाग्दो घटना यस परिवारका धेरै सदस्यहरु मिर्गौला रोगबाट गए । ५ सन्तानलाई जन्मदिए पनि अहिले नन्दकलाको साथमा जिवित सन्तान भनेको कान्छो छोरा हुन् । मिर्गौला रोगी हुन् । काम गरेर घरखर्च जुटाउने बेला नारायण ओछ्यानमा थलिएका छन् । दश बर्षदेखिको मिर्गौला रोग पिडित रहेका नारायणले उपचारमै धेरै खर्चिसकेका छन् ।
उपाध्याय परीवारमा १२ जनाको ज्यान मिर्गौलारोगबाट गएको छ । त्यो परिवारमा औषधी खाईरहेका र डाईलोसिस गर्दै जीवनका लम्बाईरहेका पनि छन् । नारायण पनि हप्ताको दुई दिन डाइलासिस गर्नको लागि बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक अस्पतालमा आउँछन् । उनका दाइका छोरा बिष्णु उपाध्याय चासिलेले पनि मिर्गौलाको रोगको औषधी खाईरहेका छन् ।
३२ बर्षिय बिष्णुको कतारमा परीक्षण गर्दा रोग देखियो । उनी अहिले पनि कतारमा औषधी सेवन गर्दे काम गरिरहेका छन् । नारायणका दाई चिन्तामणी उपाध्यायको २०६५ सालमा मिर्गौला रोगबाट मृत्यु भयो । ०६६ सालमा खिमानन्द र ०७२ सालमा हरीको मृत्यु भएको छ । उनले पनि ६४ सालदेखि मिर्गौलारोगबाट बच्नको लागि औषधी खाईरहेका छन् । ३ बर्षदेखि डाइलायसिस गरिरहेका छन् । उनका हजुरबुवा अग्नीधरका सन्तानहरुको यसैै रोगका कारण मृत्यु भएको हो । अग्नीधरका ४ छोरा हुन् । यसमा २ छोराको मिर्गौला रोगकै कारणले मृत्यु भएको हो ।
छ पुस्तासम्म मिर्गौला रोग
अग्नीधरका नातीनातीनामा अहिलेसम्म ९ जनाको मृत्यु भयो । यसमा नारायणकी फुपु दिदिको छोरीको पनि यसै रोगका कारण मृत्यु भएको हो । यही रोग लागेर मैले थाहा पाएका १२ जनाको मृत्यु भयो, नारायणले भने ‘यस्तै लक्षण देखिएका त कोको हुनुहुन्थ्यो थाहाभएन, पहिला अस्पताल थिएनन् जचाउन पाइएन । ‘
यो रोग अग्नीधरका नातीनातीनामा मात्र होइन पलातीमा पनि देखिन थालेको छ । रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेका अग्नीधरका पलाती बिष्णुले यस्तै लक्षण देखापरेको र चेकजाकको क्रममा डाक्टरले भनेअनुसार मिर्गौला रोगले बंशाणुगत रुपमा फैलिएको र ६ पुस्तासम्म यो रोग देखापर्ने बताएका छन् ।
जग्गा बेच्दै उपचार
गुल्मी जिल्लाको अर्खबाङ्गमा पर्ने नारायण उपाध्याय सानैमा बुवासँग यो ठाउँमा आएका हुन् । बुवाको मृगौला रोगले मृत्यु भयो । अनि दाईहरु पनि मृत्यु भएपछि नारायण पनि मृगौला रोग देखियो । ६४ सालदेखि यो रोगबाट पीडित नारायण रोग पीँडासगै आर्थिक समस्या पनि छन् ।रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका बाड नम्बर ३ दर्खासीबाट बुटवलका मुटु अस्पतालसम्म डाईलोसीस गर्नको लागि हप्ताको दुई पटक आउने गर्दछन् । अस्पतालले मंगलबार दिउँसो १० देखी ४ बजेसम्म र शुक्रबार १२ देखी ४ बजेसम्म उपाध्ययलाई डाइलायसिसको पालो छ । मासिक २० देखी २५ हजार खर्च हुने गरेको श्रीमती ४२ बर्षिय बिष्णु देवीले बताईन् ।
आम्दानीको स्रोत केही नभएका उपाध्याय परिवारले प्रत्येक बर्ष जग्गा बेच्दै आएका छन् । सानो घरमा ८४ बर्षिय आमा र नारायण दम्पत्ती मात्रै छन् । जग्गा बेच्दै उपचार गर्दै गर्दा ९ कट्टा जमिन घटेर ३ कट्टा वाँकी छ । चाडपर्वलाई उल्लासमय रुपमा मनाइरहँदा दसैँबाट केही मात्रामा कम गरी उपचारका लागि छटपटाई रहेकाहरुसँग यो परिवारले सहयोगको आशा राख्नु अन्यथा नहोला ।
नर्भिकको क्याथल्याबको मृत्युदर ०.१३ प्रतिशत , यूरोप-अमेरिकाभन्दा राम्रो
‘२०७७’ स्वास्थ्यमा अवसर गुमाएको वर्ष
कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दो, मंगलबार सक्रिय संक्रमित ३६०८
विद्यालय संचालनमा नयाँ मापदण्ड
ठूला शहरमा एक महिना विद्यालय बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस
दोस्रो मात्राको खोप लगाउने ‘मिति र स्थान’ सार्वजनिक
मन्त्रिपरिषद बैठक : तत्काल कुनै क्षेत्र बन्द नगरिने, संक्रमण नियन्त्रणका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याइने
कोरोनाको नयाँ प्रजाति समुदायमै, पोखरा र काठमाडौमा बढी
सुदूरपश्चिम : संक्रमित आइसोलेसन सेन्टरमा, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरु धमाधम घर फर्कंदै